पत्रकारिताः पैसा, प्रश्न र पीडा – Media Kurakani
पत्रकारिताः पैसा, प्रश्न र पीडा
June 3rd, 2015 Rabi Raj Baral Profile
आज प्यूठानका पत्रकार एलबी थापासँग फेसबुकमा कुराकानी भयो। फेसबुकमा कसैसँग मैले गरेको व्यक्तिगत कुराकानीमा तपाईँलाई रुची नहुन पनि सक्छ तर यस्ता कतिपय व्यक्तिगत कुरा प्रेरक पनि हुन सक्छन्। उनको फेसबुक पोस्ट हेरेपछि मैले उनलाई केही प्रश्न गरेको थिएँ।
उनले फेसबुकमा लेखे-
पत्रकारिता पेसासँगै एउटा व्यवसाय पनि रोजेको छु। फ्लेक्स प्रिन्ट सम्बन्धि अबदेखि सदरमकाम खलंगामै सुविधा थपिएको जानकारी गराउँछु। डिजिटल प्रिन्ट्स सम्बन्धि कुनै पनि काम गर्नु परेमा प्युठान सदरमुकाम खलंगामै पहिलो पटक सेवा दिन थालिएको छ। अहिलेका लागि सम्पर्क नम्बर मेरै मोबाइल नम्बर 9857832730 हो। इमेलः thapalb.jour@gmail.com
उनले ‘पहिलो पटक मेसिन राखिसकेपछि ट्राइ गर्दाको क्लिक’ पनि फेसबुकमा अपलोड गरेका छन्। (फोटो माथि)
उनको पोस्टमा लाइक वा कमेन्ट गर्ने विकल्प थियो मसँग तर सोचेँ- एउटा फुलटाइम पत्रकारले किन फरक क्षेत्र रोज्छ? अनि सुरु भयो उनीसँग च्याट। त्यसो त हामीबीच यो पहिलो कुराकानी थिएन। मैले उनलाई केही प्रश्न गरेँ। तर यहाँ सबै प्रश्न समावेश गरेको छैन। कहिलेकाहीँ उत्तरबाटै प्रश्न के थिए बुझ्न सजिलो हुन्छ।
‘नयाँ व्यवसायका लागि बधाई तथा शुभकामना एलबी सर।‘
‘धन्यवाद। तर फेसबुकमा फोटो राखेपछि मलाई लाग्यो- हामीलाई दया गर्ने कति धेरै हुन्? लाइक र कमेन्टको ओइरो। मलाई त लाग्यो सबैले टिठ गरे कि जस्तो।‘ उनको कुरा ‘फन्नी’ थियो तर म हाँस्न सकिन।
त्यसपछि सुरु भयो हाम्रो खास कुराकानी। उनले भने-
‘पत्रकारिता सिक्न गाह्रो, सिकेपछि टिकेपछी बिक्न गाह्रो।‘ यो त सबैले भनेको कुरा हो। काठमाडौंको स्टार एफएमबाट आइडिएल आरजे हुँदै पेसा सिकियो। आरआरमा पत्रकारिता पढियो। यसै गर्न लागेको ७ वर्ष पुग्नै लागेछ। बिहे भएको ५ वर्ष भयो। छोरो ४ वर्षको। एलकेजी पढ्छ। म्याडम एनजिओमा काम गर्छिन्। तलब बुझ्दा उनको भन्दा मेरो जहिल्यै हाफ। तर मैले बुझेको पैसा कहिल्यै भनिनँ। सिर्फ खानपिन उठबस यस्तै यस्तैमा दैनिकी बित्यो। अब त केही गर्न पर्‍यो भनेर पेसासँगै व्यवसाय रोजेँ।
पत्रकारितामा पैसा छैन भन्ने होइन, छ। मैले रासस, उज्यालो, नागरिकमा काम गर्दा वा जिल्लामा काम गर्दा पनि कहिल्यै पैसाको अभाव भएन तर गुजारा मात्र भइरह्यो। कमाइ भएन। अस्तिको फागुन १३ मा ३० वर्षको पुगियो। सोच्न बाध्य भएँ। यहाँ (प्युठानमा) नभएको नयाँ पेसा आफ्नैसँग मिल्नेजस्तै लाग्यो। अनि रोजेँ।
केही गर्न पर्‍यो, केही गर्न पर्‍यो सबैले भन्छन्। हामी भन्थ्यौँ लगानी छैन। आँट भए काम गर्न सकिन्छ भन्ने सुनेँ। पहिला आँट भराउनेहरु कत्तिका सहयोगी रहेछन् विचार पनि हुन्छ र पेसा पनि चल्छ भन्ने पो सोचियो।
अनि काठमाडौंमा भएको रिपोर्टरहरुको भेलामा नागरिकका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान (अहिले राजीनामा दिइसकेका) ले पत्रकारितासँगै केही भए पनि गर्नुपर्छ है भनेकाले पनि मेरो मन कुँडियो। यो कुरा नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावताका हो। त्यसबेलादेखि सोचेको बल्ल योजना सफल भयो।
कुरा धेरै छन्, भनिसाध्य छैन। जिल्लामा सबैले मलाई धेरै कमाउने पत्रकार, तालिम दिनेदेखि खोजमूलक फिचरबाट कमाउनेदेखि, अनेकनबाट कमाउँछ भन्छन्। मेरै अवस्था मासिक १८ हुँदा कहिल्यै बचेन। झन् रेडियोमा मात्रै बोल्ने, पत्रिकामा मात्रै झुण्डिनेको हविगत दया लाग्दो छ।
खासमा पत्रकारितामा बर्बादै भएको त होइन तर साथीहरु झन् संकटमा छन् भन्ने लाग्छ। पढाइ छोडेका छन्, घर छोडेर सदरमुकाममा छन्। विवाह टाढिएको छ। गोजीमा पैसाको अभाव छ। भत्ताबाट पाएको पैसाले रिचार्जकार्ड जुटाउँछन्।
म त बरु २/३ महिनाको नागरिकबाट बुझिरहन्छु तर यो मात्रै ठूलो होइन। गर्नु धेरै छ। अस्थिरताले मार पारिरह्यो। हामी उठ्न नसक्नु नै राजनीतितन्त्र हाबी हुनु हो, हामी उनीहरुबाट परिचालित हुनु हो।
यो क्षेत्र सुधार्न सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी पत्रकारिता गरेको व्यक्तिकै घरमा झन् बढि हिंसा हुन्छ। अरु कोबाट आस गर्ने? हाम्रो तलबबारे सोध्दा हामी झर्किन्छौँ/भन्दैनौँ। अरुलाइ सम्झाउँछौ, हाम्रो परिवारलाई सम्झाउन सक्दैनौँ।
एउटा दायरा भएको भए हुन्थ्यो। पत्रकारको मापदण्ड छैन। जो आएपनि, जो भएपनि हुन्छ, भोलिबाट पत्रकार गनिन्छ। पर्सीबाट दुख सुरु हुन्छ। यस्तै त हो मिडिया।
थापा ‘नागरिक’ दैनिकमा काम गर्छन्। प्यूठानमा ‘प्यूठान समाचार’ दैनिकमा आबद्ध छन्। उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कका लागि पनि रिपोर्टिङ गर्छन्। र, हालै उनीजस्तै युवा मिलेर प्यूठानमा ‘रेडियो कृपालु एफएफ’ को परीक्षण प्रसारण थालेका छन्।
योजनाअनुसार काम भयो भने उनले फ्लेक्स प्रिन्टसँगै त्यहाँ स्टेसनरी सामान र कम्प्युटर सम्बन्धि सेवा थप्नेछन्।
‘धेरै गफ भए क्यारे’, उनले अन्तिममा लेखे।
‘कुराकानी जारी रहनेछ’, अन्त्यमा मैले उनलाई धन्यवाद भनेँ।
पत्रकारिता पेसाबारे तपाईँ पनि बहसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो अनुभव कमेन्टमा लेख्नुस् वा हामीलाई mediakurakani@gmail.com मा इमेल गर्नुस्।
Tags LB Thapa Pyuthan
लौ, गृहमन्त्री ज्यूलाई पनि कुरीकुरी! प्रेस संयोजक विवादको भित्री कुरा यस्तो रहेछ »
« जब विज्ञापन समाचार बन्छ र समाचार विज्ञापनः एक उदाहरण
LB isabest working journalist in Puythan and his views are near to reality. So it is better to engage in various related field with media along with doing journalism.